musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Hurukuro yetsika
tsika nemagariro • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau
Chidzidzo cheItra chinowana kutora chikamu kwakanaka kwetsika muKSA uye yakafara MENA dunhu kunyangwe matambudziko ehurongwa.
King Abdulaziz Center for World Culture yakapa mishumo mitatu yakanzi "Culture in the 21 Century."
Imwe yemishumo yakanzi "Maitiro eCCIDID-19 ari kukanganisa indasitiri yetsika nekugadzira."
Zvisinei nekutora chikamu kwakanaka kwetsika mudunhu rese reMENA, tsvakiridzo inonongedza kuwanika sechipingamupinyi chikuru mukuita tsika.
King Abdulaziz Center yeNyika Tsika (Ithra), inotungamira tsika yekufunga tangi mudunhu iri, yakapa mishumo mitatu kuti inzwisise zviri nani shanduko yetsika nekugadzira indasitiri muSaudi, dunhu nepasirese. Tsvagiridzo inotora ruzhinji rwevanhu pane yavo yekugadzira uye tsika zviitiko panguva iyo chikamu chiri kuita shanduko huru uye zvishoma nezvishoma chiri kupora kubva kumhedzisiro yeCOVID-19. Inobatanidza maonero eSaudi nenyanzvi dzepasirese, ichiratidza ruzivo rwakakosha pakugadzirwa, kushandiswa uye basa rehurumende nevamwe vanogonesa chikamu.
Iwo matatu anoshuma naIthra ane musoro "Tsika mu21st Century", "Charting shanduko yeSaudi tsika uye kugadzira indasitiri" uye "COVID-19 iri kukanganisa sei indasitiri yetsika nekugadzira" fumura akati wandei dingindira-chaiwo maitiro ane chekuita netsika kudiwa uye zvido zvevatengi mudunhu rese reMENA, neNhoroondo neNhaka iri kubuda sedingindira rine mukurumbira, richiteverwa neFirimu neTerevhizheni.
Pasinei nekuwanda kwekutora chikamu kwetsika kwakanaka mudunhu rese, tsvakiridzo inonongedza kubatikana se chipingamupinyi chikuru chekubatana kwetsika. Fatmah Alrashid, Musoro weDhipatimendi uye Kudyidzana kuIthra, akasimbisa kukosha kwekusimudzira kutora chikamu kwetsika mudunhu nekutarisa "kuita kuti kubatanidzwa kwetsika kuwanikwe kune vese" maererano nehutano nehupfumi, kupa mapuratifomu anodiwa, uye kubatsira mukuitwa kwe zvirongwa zvinozoita kuti tsika dzive chikamu chezvirongwa zvedzidzo yeruzhinji uye kosi.
Tichifunga nezvezvipingamupinyi zviri pamusoro pakuita tsika uye zvakajairika Cultural Creative Indasitiri mafambiro mudunhu reMENA, chidzidzo ichi chinorumbidza akati wandei nzira uye nhanho dzemitemo kukurumidza kutora chikamu chetsika, kusanganisira:
Vagadziri vemitemo uye vanopa masevhisi vanofanirwa kutarisa mukuita kuti kutora chikamu kwetsika kuve kwakabatana nekugadzirisa zvipingamupinyi zveruzivo uye kutsigira kutora chikamu kwemapoka ane mari shoma.
Hurumende nenharaunda dzinogona kuita zvirongwa zvekusimudzira kudzidza kwetsika kweupenyu hwese (semuenzaniso, kuburikidza nekusimbisa zvakanyanya kosi yedzidzo)
Tsika masangano muMENA anogona kudzidza kubva kune ega ega masimba ekubatsira kusimudzira kutora chikamu mudunhu rese.
Pfupiso yemushumo inogona kuwanikwa pawebhusaiti yeIthra pane iyi link: Cultural Report | Ithra, uye kuti uwane rumwe ruzivo nezveIthra nezvirongwa zvayo, shanya www.naita.com.